Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 26/09/2020)
Frantsa dia maro tsara tarehy tany amin'ny toerana azo atao ny fantsona na riverboat fialan-tsasatra. Vitsivitsy ny Frantsa ny faritra hijoro ao amin'io lafiny io: ny Midi, faritr'i Aquitaine, ary ny Camargue. Tsirairay amin'izy ireo dia manana toetra miavaka.
Ny voalohany dia Canal du Midi, ny World Heritage Site sy ny tranainy indrindra any Eoropa solon renirano izay mbola manaraka ny Mazava ho azy tany am-boalohany. Izany asa Pierre Paul Riquet vita tamin'ny 1681. Teny an-dalana, cruising nidina ny Midi, hitanao Le Somail sy Carcassonne, tanàna kely roa mahafatifaty Moyen Âge. Ary raha tianao sakafo tsara ary divay lehibe, azonao atao ny manandrana ny malaza Midi Minervois sy ny Corbieres, ary cassoulet, ny sakafo an-toerana.
Inona no indrindra fa mahafatifaty dia ny hoe eny an-dalana ianao dia afaka mahita mahatalanjona lapa, Moyen Âge lapa, ary quaint tanàna taloha. Ary izay tia ny natiora, dia azo antoka fa hahazo ny tany efitra sy ny harena mbola tsy simban'ny ny bibidia.
Avy eo misy Ypres, ny toerana mahatalanjona dikany ara-tantara feno sy tsy manam-paharoa zava Flemish, feo, ary ny tsirony. Niondrana an-tsambo ny fomba matsiro Belza tanana sôkôla, na mavitrika sy matanjaka Belza labiera. Ny firenena dia miarahaba anareo tonga soa amin madio ho an'ny rehetra mahafinaritra ny saina.
Tsy misy lisitry ny Eoropa toerana tsara indrindra Mety ho tanteraka raha tsy misy ny Pays-Bas. Anisan'izany ny toerana izay manolotra ny tsara indrindra sy ny fantsona riverboat fety any Eoropa. Ny firenena ny renirano tsy maintsy hahita ny toerany ao anaty lisitra, manaitra tokony hanaovan-tsoa ho amin'ny fomba fijery, Toerana mahafinaritra lalana ary ny mora sy ny filaminana ny mandeha sambo.
#canal #riverboat #diany europetrains eurotrip trainjourney